IHOROSCOPE YAKHO KA-OKTOBHA 2021 APHA: LUNAR & LILAC ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
IHoroscope yakho kaOkthobha ka-2021 yeXesha leSpooky ilapha
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi IHoroscope yakho kaOkthobha ka-2021 yeXesha leSpooky ilapha
Ihoroscope yakho ka-Oktobha 2021 yeAries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, kunye neePisces.
IHoroscopesNgoSeptemba 27, 2021
Ngobushushu behlobo emva kwethu kunye nokubhideka kweMercury retrograde kusajinga-lixesha lokujonga phambili kwixesha leLibra. Ukusukela ngoku kude kube nge-22 kaOkthobha amandla alungeleleneyo eLibra abonelela ngamathuba amatsha okuqinisekisa eyona minqweno yethu inzulu. Ukuba ubuziva ubambekile kwinyanga ephelileyo Lixesha lokuba uvuthulule iintambo kwaye ubeke phambili iiprojekthi zakho zothando, ubudlelwane kunye nobomi basekuhlaleni!
Okthobha 2021 Izehlo zokuvumisa ngeenkwenkwezi:
INyanga eNtsha eLibra // ngo-Okthobha 6
IVenus ingena kwiSagittarius // ngo-Oktobha 7
I-Mercury iphuma kwi-Retrograde e-Libra // ngo-Oktobha 19
INyanga epheleleyo kwi-Aries // Okthobha 20
IMars ingena kwiScorpio // nge-30 kaOkthobha
INyanga eNtsha eLibra
Ngeveki yokuqala ka-Oktobha, i INyanga eNtsha iya kungena eLibra ngo-Okthobha 6 – kwangaloo mini I-Pluto iphinda ibuyele kwiCapricorn iphela . INyanga eNtsha isicela ukuba sihlole ukuba zeziphi iindawo zobomi bethu ezingasangeni kwiinjongo zethu ezinkulu. I-Libra ilawulwa yi-7H yobudlelwane, ubudlelwane bexesha elide, kunye nokuzibonakalisa. Ngoku lixesha lokuthoba isantya kwaye uphinde uqhagamshelane nabahlobo bakudala. Ukuba amandla onyaka weVirgo ebekujikeleza uzama ukulungisa izinto, ke ixesha leLibra likucela ukuba uzise ulungelelwano olufunekayo ebomini bethu. Oku kuya kubaluleka kuba kwangalo mini I-Pluto iphinda ibuyele kwiCapricorn iphela phambi kweMercury Retrograde eLibra ephela ngo-Okthobha we-19.
IVenus ingena kwiSagittarius
Ukulandela iNyanga eNtsha ingena eLibra, IVenus ingena eSagittarius nge-7 ka-Okthobha . IVenus yiplanethi enomtsalane, ezothando, kunye nolonwabo kunye namandla eSagittarius evuthayo ehlala eVenus, olu lungelelwaniso lwamandla luya kuzisa amandla adlalayo, azenzekelayo, kunye nethemba emoyeni kanye ngaphambi kwexesha le-cuffing. Eli lixesha elihle lokuswayipha ngokuthe ngqo kumntu ongenakukwazi ukuthabatha uhambo lwedwa-okanye ujonge umboniso omtsha wobugcisa. Kuxhomekeke apho iwela khona iSagittarius kwitshathi yakho yokuzalwa - ungajonga ithuba lamathuba amatsha emali njengoko unyaka uvala. Ukuba ubucinga ngebhalansi yobomi bakho bomsebenzi okanye ucinga indlela entsha yomsebenzi eli inokuba lixesha lokuhamba!
I-Mercury iphuma kwi-Retrograde kwi-Libra
Ngenyanga ka-Okthobha iiplanethi ezininzi ziya kuphuma umva; I-Saturn igqiba ukubuyiswa kwayo kwi-Aquarius ngo-Oktobha 10 kwaye I-Jupiter igqiba ukubuyisela kwakhona kwi-Aquarius ngo-Oktobha 17. Eli iya kuba lixesha elifanelekileyo lokucingisisa malunga noko sikufundileyo malunga nobudlelwane bethu kunye neziseko zoluntu kunye namanani amagunya. Oku kuhle ukuba ubuziva ungaphefumlelwanga, ungakhuthazi, okanye usokola ukulandela intuition yakho. Konke oku kwenzeka phambi kwesiganeko esikhulu sokuvumisa ngeenkwenkwezi enyangeni xa I-Mercury igqiba ukubuyisela umva ngo-Okthobha we-19 .
Ngo-Oktobha 19: I-Mercury iphuma kwi-Retrograde kwi-Libra
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo beziguqubele ngamandla eeplanethi ezininzi ezibuyela umva zidibana kanye. Inyanga ka-Okthobha ivala iMercury Retrograde yokugqibela yonyaka eLibra ngo-Oktobha 19. Impembelelo yokubuyisela kwi-Libra inokudala ukudideka kunye nokungahambi kakuhle. I-Mercury ilawula unxibelelwano kunye ne-Mercury ephuma kwi-retrograde, iingcamango zethu kunye nonxibelelwano luya kucaca ngakumbi. Lo mjikelo uya kuvalwa kanye ngexesha lokubophelela Inyanga epheleleyo kwi-Aries ngo-Oktobha 20.
Inyanga epheleleyo kwi-Aries
Iinkanuko ziqinisekisiwe ukuba zifudumale ngexesha Inyanga epheleleyo kwi-Aries ngo-Oktobha 20. Abo kuni wachitha ixesha Virgo ngocoselelo ukucwangcisa intshukumo yakho elandelayo can lindela utshintsho olukhulu kubudlelwane bakho. NgoSeptemba wayegcwele iimvakalelo ezinzima - u-Okthobha unika ithuba lokuqala ngokutsha ngeengcamango ezinkulu, eziqaqambileyo. Xa i-Aries kunye neNyanga egcweleyo zidibana, lixesha lokuba sizimisele ngeenjongo zethu kwaye silungelelanise nenjongo yethu ephezulu. Eli lixesha lokulandela inkanuko yakho!
UMars ungena kwiScorpio
Xa iMars ingena kwiScorpio nge-30 ka-Okthobha amandla eMars aya kukunika ukuzimisela, ukucaca, kunye nokuqhuba ukugqiba unyaka unamandla. Eli lixesha lokuba #girlbossing isondele kakhulu elangeni. Sukucinga kakhulu ngokulunge kakhulu ukuba ube ngamathuba okwenyani anokuwela indlela yakho ngeli xesha. Amandla adibeneyo e-Aries kunye ne-Scorpio aya kukwenza ube nesibindi ngokuzithemba ukukhulisa izakhono zakho emsebenzini. Unokuziva unomngeni wokukhula okanye ukuthatha izakhono ezitsha ngeli xesha. I-Scorpio ilawulwa yi-8H yokuguqulwa, oku kuthetha ukuba la mandla aya kuvuza abo bazimisele ukucela umngeni ngokwabo.
FUNDA NZULU: Uthando lwakho kunye ne-Sex Horoscopes: Okthobha 2021
Ngokubanzi - inyanga ka-Oktobha izele ziziganeko ezininzi ezinzima kodwa ezinomvuzo. Ukubekwa kweLibra owabeka phambili ukuzikhathalela kunye nokucamngca ngexesha leVirgo uya kuziva ubomi buqala ukubuyela endleleni njengoko iMercury iphuma kwiRetrograde kwiLibra. Ukubekwa kwe-Aries kuya kuphinda kabini kubudlelwane babo obunzulu kwaye bangene kwisakhono sabo sobunkokeli. Kwaye Ukubekwa kweCapricorn ekugqibeleni kuya kuziva kukhululeka emva kweenyanga ezimbalwa ezinzima zokusebenza nzima ngexesha lobushushu basehlotyeni. Eli lixesha lokubeka phambili iinjongo zakho zexesha elide, umsebenzi, kunye nobudlelwane.
mens iinwele abahlolokazi peak
luthetha ukuthini uphawu lwam lokunyuka
ii tattoos ezincinci zangaphambili zamadoda
tattoos emagxeni nasesifuba